I-Modern Country Family Suite w/Stunning Taal View - I-Airbnb
I-Modern Country Family Suite w/Stunning Taal View
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Sherwin & Marv
U-Sherwin & Marv Ungumbungazi ovelele
Vuka ubone okumangalisayo kwe-Taal Lake ngomoya opholile wasekuseni wase-Tagaytay nendlu yethu yomndeni enefenisha ephelele, yesitayela sezwe lesimanje. Ukupaka endaweni engaphansi kubekelwe izivakashi zethu ukuze kube lula kuzo.
Indawo yethu iyisuite yomndeni yesimanje eyakhelwe mathupha enovulandi (cishe u-70sqm noma 753sqft) e-Wind Residences, eTagaytay.
Indawo ihlukaniswe yaba izingxenye ezimbili: igumbi lokulala kanye nendawo yokuhlala. Sikholelwa ekubeni nesikhala esihlanzekile nesithokomele sokuphumula nokuphola ngokubuka okumangalisayo okukusiza ukuthi ucindezele ukuba matasa kwansuku zonke.
Igumbi Lokulala: Ikhuthazwe amagumbi omndeni wethu wezingane, indawo yethu yokulala ithatha isitayela esinezitezi ezimbili ibe yindawo yesimanje yokulala yomndeni. Kungaba isikhala samalungu omndeni angu-2 ukuya kwangu-8 ajabule nabangane.
Indawo yokuhlala: Indawo yokuphumula endaweni yokuzijabulisa enosofa othokomele, i-Smart Android TV engu-55” lapho ungazijabulisa khona ochungechungeni lwakho oluyintandokazi ku-Netflix. Xhuma usebenzisa i-wifi yethu engu-25mbps yamahhala kanye nocingo lwasendaweni ongalusebenzisela ukudiliva ukudla, futhi!
Sikholelwa futhi ezikhathini ezithule kanye nokulahleka encwadini enhle. Sineqoqo lezincwadi ongazijabulela ngenkathi uhlezi ebhentshini lefasitela lethu ngenkathi uqhabula isiphuzo sakho esishisayo esisithandayo ngechibi njengendawo engemuva.
Kokubili igumbi lokuhlala negumbi lokulala kufakwe isistimu yokupholisa umoya kodwa izihambeli eziningi zithanda ukusebenzisa abalandeli bosilingi ukuze kuhambisane nomoya opholile wase-Tagaytay.
Ikhishi & Indawo yokudlela: Zinekelele endaweni yethu yasekhishini eseduze enezinto ezibalulekile zokupheka (igedlela likagesi, isitofu serayisi, i-induction cooker, ihhavini ye-microwave, isiqandisi, izinto zokupheka ezihlukahlukene nezitsha) ngemisebenzi yakho yothando. Indawo yethu yokudlela ifika iphelele nezinto zokudla ezilungele zonke izivakashi (amapuleti, izibuko, izinkezo, izimfoloko, imimese).
T&B: Izindlu zangasese ezi-2 nezindlu zangasese ezifakwe izifudumezi zamanzi ukuze uzizwe ukhululekile ngosuku olumatasa. Sikunikeza amathawula nezinto zangasese eziyisisekelo ukuze kube lula kuwe, ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe. :)
Sikumema ukuba ugcine ikhaya lethu njengoba ubungenza neyakho. Izinto zokuhlanza ezifana nemishanelo, ipani yothuli, namanikiniki zingasetshenziswa ukuqoqa lapho uzidinga.
Imibhede emikhulu engu-2, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-4
4.87 out of 5 stars from 406 reviews
4.87 · 406 okushiwo abanye
Izakhiwo endaweni yokuhlala yomoya engaphakathi kwebanga lokuhamba eliyimizuzu emi-3.
711, Pizza Hut, DQ, Ace Hardware, BDO, LBC, Posh Nails, ilondolo
I-SM Hypermarket - 2 min ukuhamba
Watsons - 2 min ukuhamba
I-Starbucks - imizuzu emi-3 ukuhamba
Isikhwama sikabhontshisi - 5 min ukuhamba
I-Summit Ridge Promenade - 5 min ukuhamba
I-Sky Ranch - 2 min ngemoto
I-Ayala Malls Serin - imizuzu emi-5 ngemoto
I-Taal Vista - imizuzu emi-5 ngemoto
I-Tagaytay Rotunda - 6 min ngemoto
I-Twin Lakes - 18 min ngemoto
I-Caleruega - imizuzu engama-30 ngemoto
Ibungazwe ngu-Sherwin & Marv
Ungasithinta noma nini ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb. Sizokujabulela ukukunikeza iseluleko sokukusiza ukuthi usebenzise ngokugcwele ukuhlala kwakho. Uma kwenzeka singekho, u-Meanne, umnakekeli wethu esimethembayo, uzoba khona ukuze akusize ngakho konke okudingayo.
Ungasithinta noma nini ngohlelo lokusebenza lwe-Airbnb. Sizokujabulela ukukunikeza iseluleko sokukusiza ukuthi usebenzise ngokugcwele ukuhlala kwakho. Uma kwenzeka singekho, u-Mean…
USherwin & Marv Ungumbungazi ovelele
Izilimi: 中文 (简体), English, Tagalog